के साच्चिकै प्रशान्त तामाङको मृत्यु भएको हो ? - Khabar Nepali
होमपेज / मनोरञ्जन / के साच्चिकै प्रशान्त तामाङको मृत्यु भएको हो ?
के साच्चिकै प्रशान्त तामाङको मृत्यु भएको हो ?
नेपाल तथा भारतमा निकै चर्चा कमाएका गायक तथा अभिनेता प्रशान्त तामाङको अहिले मृत्युको खबर सामाजिक सन्जालमा फैलिरहेको छ। यो हल्ला नेपाल देखि कालिम्पोङ, सिक्किम, दार्जिलिङ क्षेत्रहरुमा फैलिएको थियो। यो खबर सामाजिक सामाजिक संजालमा फैलिएपछि उनका फ्यानहरु निकै दुःखि भएका थिए। कतिले त यो कुरा विश्वास गरेका थिए भने कतिले यो झुटो पनि भनेका थिए।
यो हल्ला यति फैलियो कि प्रशान्त तामाङको पत्नी मार्था तामाङसँग पनि पुग्यो। यो खबरले आजित भएपछि उनले विज्ञप्ति नै जारी गरिन्। विज्ञप्ति जारी गर्दै
मार्थाले प्रशान्त जीवित र स्वस्थ रहेको उल्लेख गरेकि थिइन्। विज्ञप्तिमा उनि लेख्छिन्, ‘प्रशान्त अहिले भगवानको आशिर्वादले जीवित र स्वस्थ हुनुहुन्छ । सामाजिक संजालमा यो हल्ला फैलिएपछि परिवार, आफन्त र साथीभाइले फोन र म्यासेज गरेर चासो दिनुभएको छ । यो माया र सदभावको लागि हजुरहरु सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।’
यो हल्ला सामाजिक संजालमा फैलिएपछि उनले त्यहाँको स्थानिय मिडियालाई उजुरी गर्ने बताएकी छिन्। साथै प्रशान्तले पनि यस विषयमा बोलेका छन्। उनि भन्छन्,’ यो हल्लाको पछि नलाग्न मा सबैलाई अनुरोध गर्दछु। अहिले भगवानको आशिर्वादले जीवित र स्वस्थ छु । सामाजिक संजालमा यो हल्ला फैलिएपछि परिवार, आफन्त र साथीभाइले फोन र म्यासेज गरेर चासो दिनुभएको छ । मेरो आयु अझै लामो होस् भनी शुभकामना दिनुभएकोमा हजुरलाई धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’